Home TRF ao amin'ny Press 2019
Hitan'ny mpanao gazety The Reward Foundation ary manaparitaka ny momba ny asantsika izy ireo: ny lesona momba ny loza mety hitranga amin'ny filokana maharitra amin'ny pôrnôgrafia; ny antso ho an'ny fanabeazana ara-nofo mahomby sy mifantoka amin'ny ati-doha amin'ny sekoly rehetra; mila fampiofanana ireo mpitsabo mpanampy NHS amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny fandraisan'anjaranay fikarohana amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ateraky ny pôrnôgrafia sy ny fikorontanan-tena maharikoriko. Ity pejy ity dia mirakitra ny fisehoantsika amin'ny gazety sy amin'ny Internet. Manantena izahay fa handefa tantara maro hafa rehefa mandroso ny taona 2019.
Feo fiainana sy kolontsaina, lahatsoratra nataon'i Roisin Agnew. Navoaka tamin'ny Internet tamin'ny 9 Desambra 2019
Ny fiakaran'ny mampidi-doza ny 'firaisana ara-nofo gony' fiarovana sy ny dikan'izany ho an'ny vehivavy
Grace Millane, India Chipchase, Natalie Connolly: tantara momba ny firaisana ara-nofo tsy miankina amin'ny vehivavy no ampiasaina hamelezana azy ireo amin'ny fahafatesana
Ny herisetra ara-nofo mihatra amin'ny vehivavy dia mitombo any UK amin'ny fomba manaitra sy tsy dia takatra loatra. Manomboka amin'ny fampiasana ny tantaram-behivavy manokana momba ny firaisana ara-nofo mandritra ny fotoam-pitsarana namonoana azy ireo hatramin'ny fankalazana sy fanararaotana fanao ny BDSM, izay matetika no omena tsiny amin'ny maha-zava-dratsy ny pôrnôgrafia mahery vaika. Ny mbola tsy mazava dia inona no anton'ity onjampeo mahery setra vaovao ity, ary ny fomba firesahan'ny vehivavy manokana sy ny firongatry ny fanaovana firaisana ara-nofo tafahoatra amin'ny olana lehibe eo amin'ny lahy sy ny vavy ankehitriny.
The famonoana ilay mpanao kitapom-batsy anglisy 21 taona Grace Millane ary ny fitsarana ambony taorian'izay dia niteraka ahiahy lalina, manasongadina ny fomba fampiasana ny fitantarana firaisana ara-nofo tsy miankina amin'ny vehivavy manohitra azy ireo ho toy ny fiarovana 'firaisana ara-nofo mafy'.
Tamin'ny alin'ny tsingerintaona faha-22 taonany, Millane - izay nanao kitapo backpack tany Nouvelle Zélande - dia niaraka tamina lehilahy iray nifanena taminy tany Tinder. Taorian'ny alina avy, roa Niverina tany an-tranony izay nanao hahasempotra azy mandritra ny firaisana ara-nofo ho faty. Na dia namoaka didim-pitsarana meloka aza ny mpitsara tamin'ny volana lasa teo, ny fitsarana dia niteraka hatezerana tamin'ny fomba nanehoana ny fiainam-pitiavan'i Grace ho porofo manohitra azy. Ny teo aloha sy ny fandraisana anjara ao amin'ny BDSM fampiasana ny mpanao ody mampiaraka fampiharana toy ny Whiplr no nampiasaina ho porofo fa nankafy sasany karazana fanao, midika fa izany no Atao hoe 'firaisana ara-nofo lasa lalao ratsy'. Ny iray tamin'ireo sakaizany taloha aza dia nantsoina hiaro azy tamin'ny fijoroana ho vavolombelona fa i Grace dia nifikitra tamin'ny fitadiavana fahafinaretana ara-nofo.
Manerana an'i Angletera tao anatin'ny folo taona lasa, nisy a Fisondrotana 90 isan-jato amin'ny fiarovana 'firaisana ara-nofo mahery', Ary tao anatin'ny dimy taona Izany dia midika hoe nahomby tamin'ny efa ho ny antsasaky ny toe-javatra. Nampihoron-koditra ny fironana mipongatra ity, actuary Fiona McKenzie natsangan'i Tsy afaka hanaiky izany isika, vondrona manao fampielezan-kevitra miasa hanana 'firaisana maloto' - na ilay antsoina hoe '50 alokaloka'- fiarovana noroahina tany ivelan'ny fitsarana britanika. Miaraka amin'ny solombavambahoakan'ny Asa, Harriet Harman, ny vondrona dia manandrana manampy fehezan-teny ho an'ny Fanararaotana Domestic Bill izany dia hahatonga azy io ho tsy ara-dalàna ho an'ny lehilahy iray izay namono vehivavy dia nilaza fa nanaiky ny herisetra nateraky ny fahafatesany izy. Nilaza ny mpihetsiketsika fa ny fanekena ny lalao ara-pananahana sasany dia tsy mitovy amin'ny fanekena hovonoina, araka ny asehon'ny raharaha Millane. Ny fiarovana 'firaisana ara-nofo mahery' koa dia manosika ny olona iharan'ny herisetra ara-nofo mba hiroso, noho ny tahotra sao hampiala-baraka na hanome tsiny azy ireo ny fiainam-pianakaviany - zavatra izay efa manjaka loatra ao amin'ny rafitry ny fitsarana.
"Matetika ianao dia tsy hahita na inona na inona momba ilay olona maty mihoatra ny anarany sy ireo fiampangana mangatsiatsiaka ireo" - Fiona McKenzie, We Can't Consent To This campaign
"Ity dia toa herisetra nentin-drazana nentin-drazana tamin'ny vehivavy izay toa mifanaraka tanteraka amin'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy," hoy i McKenzie. "Fa noho ny antony ao amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava, ary amin'ny lafiny sasany ao amin'ny haino aman-jery vaovao ihany koa raha ny tatitra, dia nino fa ny vehivavy no nanao hoe: 'Eny, te-ho mahatsiravina naratra. Te-ho nampidirina hopitaly noho ny firaisana ara-nofo ny fiainana '. "
"Matetika ianao dia tsy hahita na inona na inona momba ilay olona maty mihoatra noho ny anarany sy ireo fiampangana mahatsiravina nolazainy fa nanaiky ny fanaovana firaisana rehetra talohan'ny nahafatesany," hoy hatrany i McKenzie. "Raha toa isika dia handeha hatrany indray ny taona 90 sy ny taona 2000, misy ny anaran'ny vehivavy manerana ny famafazana gazety ambanin'ny lohateny 'firaisana ara-nofo Kinky Neny', 'BDSM mpianatra oniversite'."
Rehefa mifandray amin'ny fanontaniana sarotra manodidina ny fihaonan-dalana ny firaisana ara-nofo sy ny herisetra dia lasa olana maika, tsy noho izany dia manolotra porofo mitombo hatrany ny mahafaty ny vehivavy, fa satria misy fanehoana ny fielezan'ny fifanjevoana manodidina ny fomba ny olona eo ambany 40 no manana firaisana ara-nofo.
Nanjary malaza io firaisana malemy io tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay satria tsy nisy niresaka tamin'iza na tamin'iza, nefa mbola tsy fantatra ny politika mamoa fady ao ambadiky ny fihanaky ny tanora. Fikarohana iray notontosain'i Savanta ComRes ho an'ny BBC Radio 5 Ny herinandro lasa teo dia nanambara fa 38 isan-jaton'ny vehivavy latsaky ny 40 taona no niaina tehamaina, kendaina, na gagging nandritra ny firaisana ara-nofo. 42 isan-jaton'ireo vehivavy ireo no nilaza fa nahatsapa ho "teritery na tery" izy ireo. Ny fanazarana ny fanaovana firaisana ara-nofo mahery setra dia matetika no omena tsiny amin'ny fiparitahan'ny pôrnôgrafia mahery vaika eo amin'ny tovolahy. Saingy, hoy i Mary Sharpe an'ny Valin'ny Fanamarinana - fiantrana manokana amin'ny pôrnôgrafia sy fanabeazana ara-pananahana - ny pôrnôgrafia dia mampiorina ny vehivavy ihany koa mba hitady “ny zavatra maditra mba hahatsapana na inona na inona”.
"Tamin'ny taona 25, tahaka ny tovovavy, ianao angamba efa nijery 10 taona ny hardcore vetaveta," Hoy Sharpe Dazed. Mino izy fa ny fotoana ara-kolontsaina ankehitriny dia mandrisika ny vehivavy hampitovy amin'ny fomba diso ny famotsorana ny lahy sy ny vavy amin'ny firaisana ara-nofo - zava-misy miharatsy kokoa raha ny zatovolahy "manao atiny ho totohondry ny vehivavy". Ny teboka ny fisafotofotoana eto dia ny hoe ny vehivavy dia tsy fotsiny niharam-boina ny kolontsaina, fa mba ho insidiously namolavola ny faniriany, ka miankina amin'izy ireo mba mitady firaisana ara-nofo izay matetika momba ny famerenana mamoaka ny nofinofy izany tsy tanteraka tamin'ny azy ary mametraka azy ireo -doza.
Ny adihevitra momba ny firaisana ara-nofo mahery vaika koa dia manimba ny vondrom-piarahamonina BDSM sy ny fanaony. Nindrana ny estetika ny olona ary heverina fa 'statite devian' nefa tsy manaraka ny lalàna sy torolàlana momba ny fanekena sy ny fiarovana voafatotry ny fiarahamonina. Nentin'ilay (tsy azo ihodivirana mahatsiravina) 50 alokaloka Ny vokany dia namporisika ny fanararaotana sy ny fanolorana diso ny kolontsaina sy ny fiarahamonina BDSM, izay tena manara-dalàna - ny fanekena dia fototry ny kolontsaina kink, ary raha manao izany ara-pahasalamana sy azo antoka ianao dia afaka miditra na mivoaka na oviana na oviana. .
"Mbola sarotra ny milaza izay lazain'ity onjan'ny herisetra ara-nofo amin'ny vehivavy ity sy ny fomba niarovana azy momba antsika sy ny fotoana ankehitriny, fa na dia eo aza ny fiatrehantsika izany dia zava-dehibe ny fametrahana fiarovana amin'ny lafiny ara-dalàna sy ara-kolontsaina."
Ny fiheverana iray hafa dia ny fifandraisan'ny herisetra eo amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny 'krizy' amin'ny maha-lehilahy. Ny lehilahy dia manatratra ireo fomba maodely indrindra hanamafisana ny fanapahana sy ny fahefana ao anatin'ny fotoana krizy iraisana dia mety ho fehin-kevitra mora loatra ary tsy manana porofo tena izy (mbola). Saingy ilaina ny mandinika raha toa ny lehilahy 'mihemotra' any amin'ny tsiambaratelon'ny efitrano fatoriany ary lavitra ny mason'ny besinimaro. A post-Izaho koa ny fotoana dia nanipy ny firaisana ara-nofo tamin'ny lehilahy tao anaty fisafotofotoana: ny lehilahy sasany tampoka dia nahatsikaritra ny fitondran-tenany teo aloha fa voafaritra ho tsy ekena; ny hafa mahatsapa lolom-po ny fiovana izay nandroso tamin'ny hery lehibe kokoa sy haingana noho ny vahana ao ambadiky ny hetsika.
Conor Creighton, mpanoratra ary mpitarika misaintsaina izay nitodika tany amin'ny atrikasa fihazakazahana amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaizan'ny lehilahy, mino fa misy “fisavorovoroana be momba ny fifandraisana” eo amin'ny lehilahy amin'izao fotoana izao, fa tsy voatery ho fahatezerana. "Heveriko fa tsy tezitra ny lehilahy, fa ny fahatezerana ihany no entanin'ny lehilahy hizara," hoy izy. “Ka raha ketraka, malahelo, na misafotofoto ny lehilahy dia mipoitra ho fahatezerana izany, satria izany no ifaneraserantsika.”
Mbola sarotra ny milaza izay lazain'ity onjan'ny herisetra ara-nofo amin'ny vehivavy ity sy ny fomba niarovana azy momba antsika sy ny fotoana ankehitriny, fa na dia mifanakalo hevitra momba izany aza isika, dia zava-dehibe ny fametrahana fiarovana amin'ny sehatra ara-dalàna sy ara-kolontsaina. Amin'ny lafiny ara-dalàna, ity dia rakotry ny tian'ilay fampielezan-kevitra We Can Not Consent To This sy ny iraka ataon'izy ireo hanana fehezan-dalàna manampy ny volavolan-dalàna momba ny fanararaotana an-trano izay azo antoka fa tsy azon'ny vehivavy atao ny mamely azy. voalaza fa namono azy. Amin'ny sehatra ara-kolontsaina dia sarotra kokoa ny mahafantatra hoe aiza no hanombohana. Fanekena fa ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia miseho amin'ny fomba misimisy kokoa sy tsy miankina - ary ilaina eo noho eo angamba - satria amin'izay isika vao afaka manandrana mamaha ny olana mitombo ary indraindray mahafaty izay mahaliana ny vehivavy sy ny fanerena azy amin'ny endrika firaisana ara-nofo tafahoatra. tandindomin-doza izy ireo, ary mamela ny kolontsainay tsy ho voatanisa.
Nivoaka an-tserasera tamin'ny 6 Desambra 2019
Mary Sharpe, mpisolo vava dia miresaka momba ny sary vetaveta sy ny heloka bevava ao amin'ny The Nine
mpiaro Mary Sharpe niseho omaly alina ny BBC's Nine hiresaka momba ny normalisation ny sary vetaveta mahery setra, izay Nasongadina taorian'ny fanamelohana olona noho ny famonoana an'i Grace Millane Novambra lasa teo.
Novonoina tany Nouvelle Zélande i Ms Millane - mpanao kitapom-batsy anglisy 21 taona raha niaraka tamina lehilahy iray izy.
Ramatoa Sharpe, izay manana fiantrana Ny valin'ny Fanamarinana mahatonga ny fikarohana amin'ity faritra ity ho azon'ny besinimaro ifanakalozana hevitra momba ny trangan-javatra sy ny lalàna momba ny fanamarinana taona izay napetraky ny Fitondrana UK.
Ny pôrnônika an-telefaona dia mitondra ny zatovo amin'ny fitsaboana ara-nofo
Article nataon'i Mark Howarth sy Andrew Gregory ny Asabotsy 5 Oktobra 2019
Niakatra ny isan'ireo tanora mitady fanampiana. Ny mpanolotsaina dia manome tsiny ny horonantsary momba ny 'firaisana ara-nofo tonga lafatra' hitan'ny ankizy hatramin'ny faha fito taonany
Ny isan'ny zatovo mitady fitsaboana ara-pananahana ao amin'ny NHS dia mihoatra ny telo heny noho ny telo taona, araka ny tarehimarika ofisialy.
Ny manam-pahaizana dia nanome tsiny ny fitsambikinana tamin'ny fitomboan'ny fihanaky ny pôrnôgrafia tamin'ny finday avo lenta sy ny tambajotran-tserasera, miaraka amin'ny tanora miteny iray manantena ny firaisana ara-nofo ho "tonga lafatra isaky ny mandeha".
Raha atotaly dia zaza sy tanora 4,600 19 taona 2017 na latsaka no mila fitsaboana psychosexual amin'ny taona 18-2018 sy 19-1,400. Nandritra ny roa taona lasa dia nisy XNUMX ireo olona nampidirina.
Amin'ny ankapobeny, ny tanora dia marary 1 amin'ny 10 mahazo torohevitra momba ny firaisana, raha ampitahaina amin'ny 1 amin'ny 30 roa taona lasa izay, hoy ny tatitra nataon'ny NHS Digital.
Muriel O'Driscoll, mpanolo-tsaina sy mpitsabo aretin-tsaina izay nitsabo ny tanora tanora dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ireo ankizy, indraindray, na dia teo aza ny fisian'ny firaisana ara-nofo ny fanabeazana, matetika izy ireo tsy manao fantaro izay ataon'izy ireo na antenaina ho tonga lafatra ny firaisana ara-nofo isaky ny mandeha.
“Tsy fantatr'izy ireo izay ataony satria ny horonantsary mamoa fady na horonan-tsary amin'ny Facebook sy ireo media hafa rehetra no ifotoran'izy ireo. Tsy resaka zava-misy izany - tsy lavorary ny zava-misy. Indraindray miasa ny firaisana; indraindray tsy.
"Manantena ny olona izy ireo mba ho afaka ny hanana orgasms amin'ny indray mipi. Ary, mazava ho azy, raha misy tanora manana fanandramana ratsy tamin'ny fanaovana firaisana ara-nofo tany am-boalohany, dia ao an-tsainy izany. ”
O'Driscoll, izay niasa tao amin'ny foibe mpanolotsaina NHS sy Brook ary manao fanazaran-tena manokana any Merseyside, dia nilaza ihany koa fa ny zazalahy sy zazavavy indraindray dia manahy fa tsy mitovy na tsy refy amin'izay hitany an-tserasera ny taovam-pananahana.
Tafintohina amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet ny ankizy hatramin'ny faha fito taonany, tatitra iray hita tamin'ny volana lasa teo. Ny fanadihadiana, avy amin'ny British Board of Film Classification, dia nanolo-kevitra fa ny telo ampahefatry ny ray aman-dreny dia mahatsapa fa tsy hahita sary vetaveta amin'ny Internet ny zanany, saingy mihoatra ny antsasaky ny nanao izany. Nilaza ny fahatsapana ho “very hevitra” tamin'ny zavatra hitany ireo tanora.
Mary Sharpe, tale jeneralin'ny fikambanana mpanao asa soa, The Reward Foundation, dia nilaza hoe: "Ny fampiasana teknolojia be loatra dia miteraka tanora manahy, kivy ary manana olana ara-tsaina. Hatramin'ny nahatongavan'ilay haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha tamin'ny 2006, dia nirongatra ny tanora ny fihanaky ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina. Mifamatsy ve izy ireo?
“Ny indostrian'ny Internet sy ny pôrnôgrafia dia manao izay fara heriny farany handavana izany, saingy heverinay fa mifandray izy ireo satria matetika ny tarehin-tsoratra no mihamazava rehefa mandeha mamaky detox nomerika izay mamela ny ati-dohany hiovaova amin'ny fahafinaretana andavanandro.”
Nandritra izay roa taona lasa izay, ny isan'ireo sokajin-taona rehetra mitady fanampiana dia nitombo kely ho 47,300, izay ny 10% dia zatovo.
Claire Murdoch, talen'ny fahasalamana ara-tsaina ao amin'ny NHS England, dia nilaza hoe: "Ny zavatra miharihary dia ny filàn'ny faritra hafa amin'ny fiarahamonina hanomboka handray andraikitra amin'ny hetsika ataon'izy ireo, hampihatra adidy ara-dalàna amin'ny fikolokoloana ary hanafoana ny fitondran-tena manimba eo amin'ny Internet - noho izany tsy avela haka ny sombin-javatra ny NHS. ”
Mary Sharpe dia voatonona amin'ity lahatsoratra matanjaka be ity momba ny fitondran-tena eo amin'ny sehatry ny pôrnôgrafia. FAMPITANDREMANA: ity fitaovana ity dia misy fitaovana mety hahakivy ny mpamaky sasany. Navoaka tamin'ny 27 septambra 2019.
Ahoana ny fanadiovana ny indostria sadista
Filankevitra maromaro no namoaka fitarihana mampiahiahy momba ny firaisana ara-nofo sy ny fifandraisana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora, izay tsy mahasarika ny sain'ny fijerena sary vetaveta miely patrana. Tatitra nataon'i JO BARTOSCH
JESSICA REDDING dia maty tamin'ny herinandro lasa; nanamafy ny Coroner any Los Angeles County fa 40 taona izy.
Nihetsika tamin'ny sary vetaveta izy tamin'ny anarana hoe Jessica Jaymes. Ny fahafatesany aloha loatra dia tsy fahita firy amin'ireo izay antsoina amin'ny fomba fiteny hoe "indostrian'ny fialamboly ho an'ny olon-dehibe."
Ny sary mihetsika mamoafady voalohany nataon'i Redding dia i Little Girl Lost, fony izy vao 16 taona.
Androany, raha ny fatin'i Jessica Redding miandry ny fandefasana ra any Los Angeles, farafaharatsiny tranokalan'ny filankevitra iray eto Grande-Bretagne no milaza amin'ireo ankizy tanora kokoa noho i Redding fony izy nilalao tamin'ny horonantsariny voalohany fa mila miala amin'ny fihantonany izy ireo sary vetaveta.
Warwickshire County Council's Torolàlana "Hajao ny tenanao", izay tohanan'ny Public Health Warwickshire, dia manampy amin'ny famoahana ilay lazainy ho angano momba ny pôrnôgrafia.
Warwickshire dia iray monja amin'ireo filankevitra maro izay namorona fitarihana ahiahy momba ny firaisana sy ny fitarihana ny fifandraisana natao ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe.
Ny mpamaky sasany dia mety mieritreritra fa ny olan'ny ankizy mijery pôrnôgrafia dia ny fanodikodinana ny fahatakarany ny firaisana ara-nofo, azo inoana fa mitarika valanaretina amin'ny zazalahy maka tahaka ny zavatra hitany sy mametaveta ankizivavy any am-pianarana (mahaliana Ny fanararaotana ara-nofo “peer on peer” tany an-tsekoly dia nitombo 521 isan-jato tao Warwickshire teo anelanelan'ny 2013-16).
Ny sasany mety mitanisa ny fiakarana amin'ny labiaplasties na ny 40 isan-jaton'ny tovovavy izay nitatitra fa noterena hanao firaisana, mba hanaporofoana fa misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina ny pôrnôgrafia.
Samy diso izy roa, hoy ny tari-dalan'ny Respect Yourself, izay milaza am-pitokisana ny iray amin'ireo “olana lehibe indrindra ho an'ny tanora mijery pôrnôgrafia dia ny fahitana azy ho zavatra 'tsy tokony hataon'izy ireo'.”
Ao anatin'ny fiezahan'izy ireo mampivadi-po ho toa “ambany vady da ankizy”, ireo ao ambadiky ny fitarihana toy izany dia mamadika ny tenany ho misogynista tsy mahalala na inona na inona.
Ireo mpitsikera izay sahy manome sosokevitra ny hijerena ireo “Lesbien anal lesbien 2”, “All anal 3” na “Slave for a Night” (anaram-boninahitra rehetra faran'izay namidy an'i Jessica Redding izay efa voalaza etsy ambony) dia mety tsy hampanan-karena ny fahazoan'ny ankizy ny fijerin'ny fifandraisana salama toy ny, dia mazava ho azy fa tsy misy ifandraisany amin'ny voahangy izay mety mila fahitana tsara.
Raha ny marina, ny antony mahatonga ny feminisma maro ho kivy tanteraka amin'ny fisian'ny pôrnôgrafia miely patrana noho ny fangalarana ny zon'ny iPhone hanana fahalalàna ara-nofo tena izy.
Tsy misy maharatsy ny manome toky ny tanora fa ny filokana dia tsy hahatonga azy ireo ho jamba ary afaka manampy azy ireo hahatsapa ho maivamaivana ao amin'ny vatany izany.
Fa rehefa zazavavy iray 12 taona no nanoratra ho an'i Hajao ny tenanao, manahy fa andevozin'ny pôrnôgrafia izy ary nanambara fa nijery azy nandritra ny "antsasaky ny alina" izy, ny valiny dia tsy nilaza taminy fa manimba ny pôrnôgrafia ary tsy hanome toky azy koa fa ny firaisana sy fanararaotana aseho dia tsy izay mety manantena rehefa olon-dehibe.
Raha ny tena izy dia hajao ny tenanao fa ny sary vetaveta dia mampiankin-doha na manimba amin'ny fomba rehetra.
Araka ny Mary Sharp-tsoa izy Foundation, fiantrana-pampianarana mifantoka amin'ny fitiavana, firaisana ara-nofo sy ny aterineto, izany no tsy marina tsotra izao.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Guardian tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanazava izy hoe: “Ny pôrnôgrafia be loatra dia manova ny fomba hahatonga ny ankizy ho taitaitra ara-nofo… amin'ny taona iray izay mora tohina indrindra amin'ny aretin-tsaina sy ny fiankinan-doha. Ny ankamaroan'ny fiankinan-doha sy aretin-tsaina dia manomboka amin'ny fahatanorana. ”
Ny valin'izany dia azo jerena tsara ao amin'ny tahan'ny tsy fetezan'ny erectile, izay nitombo avy amin'ny tombanana ho 2-3 isan-jaton'ny lehilahy latsaky ny 35 tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 30 isan-jato hatramin'ny nivoahan'ny pôrnôgrafia maimaimpoana maimaimpoana.
Na aiza na aiza ao amin'ilay tranonkala dia misy "quiz fifandraisana" manasa ny mpampiasa hisafidy ny lisitr'ireo valinteny mety hitranga raha tratran'izy ireo mijery ny pôrnôgrafia ny namany.
Fantatsika amin'ny zava-misy fa ny "mpiara-miasa" mijery pôrnôgrafia dia mety ho lehilahy, na dia Mampahatsiahy antsika am-pifaliana antsika aza ny hoe "Hajao ny tenanao" fa samy mijery pôrnôgrafia avokoa na ny lahy na ny vavy.
Na misafidy ny safidy "mahamenatra" na "mafana" ianao, ny valiny dia ny fametrahana ny tsy fahazoana aina manokana satria "tia fiderana" ny tsirairay.
Raha mazava, ny fananana “fiderana” dia tsy olana, ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia ampiasain'ny mpiara-miasa amin'ny fahatokisan-tena.
Lavitra ny fanakaikezana ny olona ny fampiasana sary vetaveta a antony lehibe amin'ny fisarahana fifandraisana.
Miaraka amin'ny fitsidihana ireo tranokala mamoa fady izay mitambatra ao amin'ny Netflix, Amazon ary Twitter natambatra, ny indostrian'ny firaisana dia tsy isalasalana fa ho velona raha tsy misy ny fanampiana amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe avy amin'ny fifohazan'i Warwickshire.
Na eo aza izany, ny tari-dalan'ny Respect Yourself dia manao asa fifandraisam-bahoaka ho an'ny indostria, manazava hoe: "Ny indostrian'ny firaisana dia iray amin'ireo vitsy ahazoan'ny vehivavy vola be noho ny lehilahy."
Ho an'ny vitsy an'isa vitsy an'isa dia marina izany. Raiso i Sheena Shaw, ohatra. Nalaza ho an'ny tenany izy hoe:mpanjakavavin'ny rosebudding. "
Rosebudding no teny ampiasaina amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia amin'ny firoboroboana anal, izay anesorana ny refy hiala amin'ny lava-bato.
Toa mahatsikaiky izany, araka ny nanamarihan'i Shaw tamim-pitandremana hoe: “Mampianatra antsika izay tiana sy izay tsy tiana ny kolontsaina.”
Ireo vehivavy manao an'io risika io dia miteraka fanaintainana mahatsiravina, olana amin'ny tsinay be ary famoahana anal.
Rehefa nanontany an'i Shaw momba ny zavatra azony atao raha sendra ratra i magazine Vice dia namaly izy hoe: "Tsy misy miresaka momba an'izany mihitsy. Mampanao sonia fanafoanana alohan'ny hanaovanao ireo seho ireo izy ireo. Tsy hahazo comp compt an'ny mpiasa mihitsy ianao. ”
Angamba Tsy mahagaga nomena ny fitakiana ny ara-batana amin'izao fotoana izao ny sary vetaveta, ireo izay mivoaka ny orinasa tatitra izay zava-mahadomelina, fanararaotana ary faneriterena mivoaka ny seta; ny ankamaroan'ny vehivavy dia maharitra eo anelanelan'ny telo sy 18 volana alohan'ny andehanany.
Aleo milaza ny marina, tsy misy na inona na inona manome hery ny famongorana ny refinao eo am-piantsoana hoe "mpivaro-tena", mandrora ary tototry ny fakan-tsary.
Na eo aza ireo zava-misy mahery setra ireo dia manambara ny tranokala Respect Yourself fa “asehon'ny fandinihana fa raha ny marina dia manana fahatokisan-tena sy fahafaham-po ambony noho ny salanisan'ny mponina ny kintan'ny vehivavy. Ireo fandinihana ireo dia tsy resahina.
Ao amin'ny fiarahamonina feno sary vetaveta, mila mijery ny zava-misy isika ary manomana ny ankizy amin'izay mety ho hitany an-tserasera ary, amin'ny hitsiny, ny sasany amin'ireo torolàlana amin'ny Fanajana ny Tenanao dia mangoraka sy mieritreritra.
Fa ny sanitisation an'ny indostria mampalahelo miorina amin'ny fahorian'ny vehivavy sy ny zazavavy dia tsy azo avela.
Ao amin'ny tanjon'izy ireo ho toa misy ifandraisany, mifantoka amin'ny tanora sy azo ifandraisana, ny filan-kevitr'i Warwickshire County dia mety hampidi-doza ny fikolokoloana ny taranaka iray hieritreretana fa ny fanararaotana aseho amin'ny pôrnôgrafia dia tsy hoe ara-dalàna, fa ilaina ihany.
Jo Bartosch dia talen'ny Click Off, fanentanana hamaranana ny filan'ny pôrnôgrafia. Tsidiho azafady ny tranokalany ary diniho ny fanomezana www.eliamisk.org.
Mary Sharpe dia notononina matetika tao amin'ity sombin'i Peter Diamond ity, navoaka ny 19 aprily 2019.
'Blaogy vetaveta' ho avy any Angletera no raisin'ireo mpanentana, fa ny olana momba ny fahalalahana miteny kosa dia nasongadin'i Church.
Ny katolika dia nandray ny fanakanana taona ho avy momba ny pôrnôgrafia any Angletera, izay hitranga amin'ny volana ho avy, ary nilaza fa ny fiangonana dia afaka mitarika amin'ny ady amin'ny voka-dratsin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia.
Nambara tamin'ity herinandro ity fa ny fanamarinana taona ho an'ireo tranonkala vetaveta dia hampiditra amin'ny 15 Jolay.
Raha vantany vao ampidirina, ny olon-dehibe dia tsy maintsy manaporofo fa mihoatra ny 18 taona izy ireo amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ny antsipirihany na mividy tapakila mba hidirana amin'ny pôrnôgrafia.
Ny katolika izay manampy amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha sy ny fiangonana any Ekosy dia nanaiky ny hetsika, na dia mitandrina aza fa ny fiarovana ny fahalalahana miteny dia tsy maintsy arovana amin'ny sivana ataon'ny governemanta.
Matt Fradd dia mpanoratra ary mpandahateny momba ny pôrnôgrafia any Etazonia.
Vao haingana izy no nandefa programa vaovao 21 andro Strive21 hanafaka ny olona amin'ny voka-dratsin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia.
"Tena faly aho ny UK Porn fandrarana," hoy izy. "Tsy hijanona ireo tanora miezaka ny fidirana resa-betaveta, fa soa ihany ankehitriny isika dia mahita izao karazana fanakanana nampidirina.
“Manana andraikitra eo amin'ny ady amin'ny sary vetaveta ny Fiangonana. Araka ny filazan'ny katesizy katolika hoe: 'nohariana tahaka ny endrik'Andriamanitra isika', ary noho io antony io dia manova ny fomba fiheverantsika ny olona. Ny fampianaran'ny Eglizy momba an'io lohahevitra manokana io dia ny fanandevozan'ny pôrnôgrafia antsika - nantsoina ho tompon'ny filan'ny nofo isika. ”
Loza tsy fantatra
Mr Fradd nanampy hoe: "Porn fampiasana efa rocketed tato anatin'ny taona vitsy, ary ny ankamaroan'ny ankizy 8-12 taona no mijery sary vetaveta, ary izy ireo ankapobeny Ginea kisoa zavatra isika fa tsy tena mahalala mampidi-doza izany raha 50 taona nidina ny tsipika.
"Heveriko fa zavatra iray ao anatin'ny 50 taona dia hampihozongozona antsika ny olona amin'ny filazàna hoe: 'ahoana no anaovanao an'ity, ahoana no ahafahanao mamela anay hijery an'io zavatra io.'
"Loza miandry fa hitranga fa soa ihany fa manomboka mihaino ny olona ary mifoha amin'ny voka-dratsy ateraky ny ankizy mijery pôrnôgrafia."
Strive21 nanomboka tao amin'ny US roa herinandro lasa izay, ary efa nisy olona maherin'ny 1,000 sonia niakatra ho any amin'ny resa-betaveta-fandaharana fahazaran-dratsy, ary ny seminera katolika no liana amin'ny fampiasana ny fitaovana.
Manimba ny fiankinan-doha
Pretra skotika iray nandray anjara tamin'ny minisitra fanasitranana koa dia nandray ny fandrarana rehetra mety hanohitra ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia
Canon William Fraser, paroasy an'ny fiangonana Visitation any Taynuilt, dia nilaza hoe: "Mampalahelo fa nahita ny voka-dratsin'ny fiankinan-doha tamin'ny asako tamin'ny asa fanompoana fanasitranana aho.
"Amin'ny ankapobeny, ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia dia lasa fahazarana ho an'ny olona iray tsy amin'ny alàlan'ny pôrnôgrafia fotsiny fa ho fanehoan-kevitra amin'ny 'mandratra.' Io dia toy ny endrika fiankinan-doha rehetra, na zava-pisotro na zava-mahadomelina ary matetika kokoa raha tsy sitrana ilay ampahany 'maharary' dia lasa mora kokoa ny miatrika ilay 'fahazarana.' ”
Canon Fraser dia nanampy fa ny 'fanesorana' olona iray amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia dia mety maharitra iray fotoana monja fa amin'ny 'tranga faran'izay mafy' dia mety maharitra amam-bolana na taona maro vao hiresahana.
"Tsy maintsy ampahatsiahivina tsy tapaka isika fa ny hery ao anatintsika amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy dia lehibe lavitra noho ny hery rehetra eto amin'izao tontolo izao," hoy i Canon Fraser, ary nilaza fa 'Andriamanitra dia hanafaka antsika tahaka ny nandreseny ny ota rehetra teo amin'ny hazofijaliana. '
Orinasa manerantany £ 75 miliara ny pôrnôgrafia Ny fandinihana iray tamin'ny taona 2016 navoaka tao amin'ny Eastern Economic Journal dia nanambara ny olona mijery pôrnôgrafia matetika dia tsy dia manambady firy noho ireo tsy mahita.
Mary Sharpe dia tale jeneralin'ny The Reward Foundation, fikambanana mpanao asa soa miorina any Ekosy izay mijery ny siansa ao ambadiky ny firaisana sy ny fitiavana.
Hoy Ramatoa Sharpe: “Manohana tanteraka ny lalàna ho avy izahay. Matetika ny ray aman-dreny dia mieritreritra fa ny pôrnôgrafia dia 20 taona lasa izay, saingy vao mainka ratsy kokoa izany ankehitriny. Izy io dia mitondra herisetra ara-nofo be dia be.
“Misy fiatraikany lehibe amin'ny sain'ny olona izany, indrindra ireo tanora izay efa zokiolona amin'ny zavatra rehetra.”
Ny Papa dia nanohana ny fiantrana an-dRamatoa Sharpe, ary miara-miasa amin'ireo sekoly katolika izy mba hamolavolana drafi-pampianarana ho an'ny mpampianatra.
“Heverinay fa manakiana io lalàna vaovao io. Tsy hanasitrana ny olana izany fa tena ilaina ny fampianarana any an-tsekoly sy any an-trano, ”hoy izy.
“Mamorona sy mamolavola drafitry ny lesona ho an'ny sekoly manerana an'i Ekosy izahay, ao anatin'izany ireo katolika, izay hamoronana azy ireo mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Fiangonana sy ireo loharanom-pahalalana feno fitiavana avy amin'Andriamanitra.
“Ny fiangonana sy ny paroasy dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny olana. Tena zava-dehibe ny mampianatra ny katolika an'ity lohahevitra ity ary tsy afaka mivavaka fotsiny ny fiangonana fa hivoahana izany olana izany - mila mihaino izy ireo ary mihetsika am-pinoana ary raha manao izany izy ireo dia afaka mitarika ny olana. ”
Nanampy i Mary fa ny pretra dia azo 'omena hery' hiresaka momba ilay olana na hanolotra torohevitra ho an'ny olona momba ny toerana haleha mba hahazoana fanampiana.
Na izany aza, nanentana ny ahiahiny ireo mpihetsiketsika momba ny fahalalahana miteny fa hahita izany famongorana ny fahalalahana miteny izany ny lalàna vaovao. Ny fandrarana pôrnôgrafia dia ampahany amin'ny ezaky ny governemanta misimisy kokoa hametra izay heveriny ho kabary fankahalana amin'ny Internet.
Ny mpitondra tenin'ny fiangonana katolika any Scotland dia nilaza hoe: ny fomba fijery sy adihevitra, tsy misy tahotra na fankasitrahana.
“Ny fiarovana ny fiarovana an-tserasera ny ankizy sy ny vondrona marefo dia tena zava-dehibe. Raha tsy misy famaritana kendrena momba ny 'harms' dia sarotra ny mahita ny fomba hanaovana izany. ”
"Ny famelana ny mpandrindra mahaleo tena hanapa-kevitra raha manimba na tsia ny atiny, dia mety hitarika fameperana amin'ny fanehoana ny finoana ara-pivavahana."
Nandray ny fanakanana ny pôrnôgrafia ny fikambanan'ny ray aman-dreny katolika any Ekosy.
Jo Soares, talen'ny vondrona ray aman-dreny ao amin'ny Sampam-pianarana Katolika Skotika, dia nilaza hoe: "Ny lalàna vaovao dia tokony hanasarotra kokoa ny fidiran'ny ankizy amin'ny resaka firaisana ara-nofo tsy mendrika amin'ny Internet na fanahy iniana na fanandramana.
“Zava-dehibe ny hameperanay ny atiny vetaveta mba tsy hananan'ny zanatsika fihetsika tsy azo antoka amin'ny fihetsika ara-nofo sy ny fanekena na ny fomba fijery tsy azo tanterahina momba ny fifandraisana sy ny sarin'ny vatana.
"Ny fameperana ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho an'ny olon-dehibe dia antenaina fa hampiasarotra kokoa ny fitarihana ny zanatsika mankany amin'ny fitaovana izay mampianatra mifanaraka amin'ny finoantsika ny fahamendrehan'ny olona tsirairay."
Viagra amin'ny maha-zava-mahadomelina fomba fiainana azy dia nahita an'i Mary Sharpe voalaza tao amin'ity lahatsoratra fomba fiainana Huffpost tamin'ny 3 aprily 2019 ity.
'Alain'izy ireo alohan'ny handehanany any amin'ny klioba iray': Maninona ny Viagra no ampiasain'ny taranaka vaovao
Tsy zava-mahadomelina ho an'ny anti-panahy intsony, Viagra dia ampiasain'ny zazalahy amin'ny fotoam-pahalalahany. By Sophie Gallagher
Fanintelony izao i Alex * no nanandrana nametraka kapaoty ary tsy nahomby. Na teo aza ny fahatairana ary ny fahafantarana fa io angamba no hany fotoana azony hanaovana firaisana tamin'ilay vehivavy nihaona taminy tamin'io hariva io, dia tsy afaka nijoro tsara izy. Na toy inona na toy inona fanirian'ny ati-dohany hanao firaisana, ny vatany dia tsy manaraka.
Tamin'ny farany dia nanaiky ny toe-javatra izy, nifona tamin'ny daty nampiarahany noho ny “fitaintainana amin'ny fampisehoana” - niharatsy noho ny fisotroana alikaola sy kôkainina - ary nivoady fa tsy hamela azy io hitranga indray. Ny ampitso dia nankany amin'ny mpahay simia izy ary nividy fonosana takelaka sildenafil 8, fantatra amin'ny anarana hoe Viagra.
Alex, eo amin'ny faha-XNUMX taonany, dia tsy mifanaraka amin'ny stereotype an'ny mpampiasa Viagra: mbola hitan'ny fiarahamonina ny pilina manga dia mitovy dika mitovy amin'ireo lehilahy efa manambady, mety ho salama sy mijaly noho ny tsy fahampian'ny erectile mifandraika amin'ny aretina. Saingy ny raharaha Alex, sy ny fanapaha-kevitra hampiasa viagra hiatrehana ny olana, dia lavitra tsy manam-paharoa.
12 volana izao taorian'ny nahatongavan'i Viagra tany Angletera ary tsy nahazoana dokotera. Nanapa-kevitra ny mpivarotra raha hivarotra ny zava-mahadomelina ho an'ny lehilahy, marika antsoina hoe 'Viagra Connect' ary nataon'ny mpanamboatra Pfizer, miorina amin'ny fahasalamany sy ny fanafody hafa mety ho nohanin'izy ireo. Ny tanjona voalohany rehefa nampitombo ny fidirana amin'ny rongony amin'ny taona 2018, dia ny hiady amin'ny isan'ny pilina tsy fampiasa erectile sandoka amidy an-tserasera tsy ara-dalàna. Saingy ny fanapahan-kevitra koa dia nisy vokany tsy nampoizina tamin'ny fampidirana ny zava-mahadomelina amin'ny ampahany vaovao amin'ny tsena.
Murray Blacket, mpitsabo ara-pananahana any avaratr'i Londres, dia nilaza fa mahita zatovolahy maro kokoa mandray an'i Viagra ho toy ny “politikam-piantohana” na “booster shot” mandra-pahafatiny tao amin'ny efitrano fandriana. Matetika izany dia alohan'ny handehanany mivoaka alina.
“Miresaka momba ny LGBT izahay sehatry ny chemsex fa eo amin'ny sehatra mahitsy kosa dia misy mitovy amin'ny faran'ny herinandro very izay ifandraisanao amina olona iray, makà kôkainina sy Viagra betsaka, midina ny lavaky ny bitro, mivoaka ny alatsinainy, "hoy i Blacket.
Tamin'ny volana aogositra 2017 lasa teo, valo volana talohan'ny namarotana azy teny amin'ny arabe, dia dokotera any UK dia nitatitra fironana mihamitombo ny zatovolahy mividy an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny ezaka hanatsarana ny filan'ny nofo na, toa an'i Alex, hanoherana ny fampiasana fanafody fialam-boly hafa izay manasarotra ny fitazonana ny fananganana.
Ny olona any Angletera dia be lavitra noho ny any amin'ny faritra hafa any Eropa, Amerika, Aostralia na Kanada, mampifangaro firaisana amin'ny zava-mahadomelina, hoy ny fanadihadiana momba ny zava-mahadomelina eran-tany, na firy na firy na firy na taona. Ny akora mahazatra indrindra ampiasaina dia ny alikaola, rongony, MDMA ary cocaine - izany rehetra izany dia mety hanakana ny fanaovana firaisana raha raisina amin'ny fatra avo.
Ny Viagra dia miasa amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fikorianan'ny ra ao anaty ny filahiana hitazonana azy. Tsy misy vokany eo noho eo izany ary mandeha ihany rehefa taitaitra ara-nofo ny lehilahy. Noho izany dia tsy mandeha manodidina ny clubclub misy fananganana mandritra ny ora maro ianao, fa afaka miantehitra amin'izany raha toa ka mahazo vintana amin'ny faran'ny alina.
Nilaza i Blacket fa maro amin'ireo tovolahy mandray izany no matihanina - mpampianatra, mpisolovava, mpampiofana manokana. Ny Viagra dia tsy lafo tahaka ny taloha, nefa mbola mitentina £ 19.99 amin'ny fonosana efatra-tablette na 34.99 ho an'ny valo. Tsy mora ho an'ny inona, amin'ny fomba mahomby, 'raha sendra misy'.
"Ny tovolahy tanora dia vao mainka tsy matoky tena amin'ny fahaizany manao firaisana", hoy i Blacket. "Ireo olona ireo dia mandray Viagra ho fanamafisana ny fahatokisan-tena. Tsy ny fanaovana firaisana ara-nofo mahaliana kokoa - fa ny fahaizana manao firaisana amin'ny 'firaisana ara-dalàna' fotsiny. ”
Io fihenan'ny fahatokisana io matetika mifandray miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny olona mijery sary vetaveta an-tserasera tsy tapaka. Ny fandalinana vao haingana dia hita teo anelanelan'ny 14% sy 35% ny zatovolahy milaza fa miaina tsy fetezana erectile raha oharina amin'ny 2-3% talohan'ny 2008. Mary Sharpe an'ny Valin'ny Fanamarinana, fiantrana fanabeazana mifantoka amin'ny fitiavana, firaisana ary internet nilaza tamin'ny Guardian: “Nanomboka tamin'ny 2008, rehefa lasa mora azo ny sary vetaveta maimaimpoana maimaim-poana, dia nitombo hatrany izany.”
Ny tontolon'ny fiovana mampiaraka dia manana anjara andraikitra ihany koa, "hoy i Blacket, miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiharana mampiaraka ary ny fifantohana amin'ny firaisana ara-nofo mahazatra izay midika fa tsy maintsy manaitra ny lahy sy ny vavy ny olona. "Raha tsy mandeha tsara aminao io dia afaka miroso sy mihaona amin'ny olon-kafa ny olona," hoy izy. “Ny kolontsaina tokana mijoro amin'ny alina dia mifanakalo resaka amin'izany. Manana vintana iray ianao. ”
Tsy vitan'ny fanerena bebe kokoa ny ho vonona hanao firaisana foana, fa ny ankamaroan'ny firaisana ara-nofo kosa dia voarafitry ny fisian'ny alikaola sy zava-mahadomelina hafa manakana ny fampisehoana. “Matetika ireo lehilahy ireo dia manao firaisana rehefa avy misotro, raha tsy zava-mahadomelina koa. Ny fandraisana ny Viagra dia toa mifamatotra amin'ilay eritreritra hoe 'Afaka manana pints vitsivitsy aho ary mbola ho vitako ihany'. ”
Ary io eritreritra io dia lasa be mpampiasa kokoa, satria ny Viagra dia lasa miorina amin'ny kolontsaina mahazatra, hoy i Blacket. “Misy dokambarotra eny ambanin'ny tany sy eo anilan'ny aotobisy ankehitriny ho an'ny Viagra [aterina] amin'ny Vespa. Ireo orinasa ireo dia nahita fiovana teo amin'ny tsena ary nanararaotra izany. ”
Toa ny fananana orinasa manana endrika Deliveroo mitondra Viagra eo am-baravaranao no nandray anjara tamin'ny fanaovana izay mahasarika ny tanora kokoa ny zava-mahadomelina. Raha tokony ho zavatra mila angalarinao amin'ny kabinetran'ny fidianao dadanao dia azonao atao ny manafatra azy amin'ny fomba pizza. Ny fitaoman'ity fiovan'ny kolontsaina ity dia nahatonga an'i Blacket hahita lehilahy vitsivitsy tsy misy ahiahy momba ny fampisehoana, izay nieritreritra fa ny fanaovana Viagra dia hahatonga azy ireo ho "sarotra kokoa" sy hanao firaisana mahafinaritra kokoa.
Blacket dia manana ahiahy ny sasany amin'ireo izay misafidy ny hampiasa Viagra fialam-boly handray doka avo kokoa noho izay hatolony matetika. Betsaka no mihinana takelaka 100mg, raha toa kosa ny NHS dia mamporisika fatra 50mg indray mandeha isan'andro. "Tsy tena fantatry ny olona ny dikan'ireo fatra - mampihatra toe-tsaina vitamina amin'ny fakana bebe kokoa izy ireo." manazava izy. ”
Ny fihinanana sildenafil be loatra dia mety hiteraka voka-dratsy tsy mahafinaritra toy ny aretin'andoha, fanina, tsy fihinanan-kanina, orona voasakana ary fahitana miova. "Nanontaniako ny sasany tamin'izy ireo ny zavatra tsapan'izy ireo ny ampitso ary lazain'izy ireo fa henjana izy ireo," hoy izy. “Ny sasany amin'izy ireo dia nanatona ahy ary nanontany hoe: 'Tokony hatahotra ve aho? Mandra-pahoviana no hahavitako izany? ”
Mampatahotra azy ny fampiasan'ny olona ny pilina amin'ny fametahana ireo olana lehibe sy lalim-paka izay manakana ny fiainam-piraisan'izy ireo. “Mametraka fanampiana amin'ny tarika izy ireo amin'ny olan'ny Viagra. Tsy maintsy fanamboarana vonjimaika izany. ”
Notsongaina tao amin'ity tranonkala Katolika ity teny nalaina avy tamin'i Mary Sharpe tao amin'ny Tantara 11 martsa tao The Guardian LifeSiteNews. Ny lahatsoratra dia mitanisa ireo loharano hajaina ao anatin'izany ny neurosurgeon Dr Donald Hilton sy yourbrainonporn.com.
March 29, 2019,LifeSiteNews) - Voaroba amin'ny fahafahany miditra amin'ny firaisana ara-nofo voajanahary amin'ny vehivavy ny tovolahy satria mijery sary vetaveta matetika ny atidohany, manimba ny fahafahany manao firaisana.
Amin'ny lafiny iray, ny lahy eo amin'ny zatovo amin'ny alàlan'ny 30s dia atokana ho amin'ny firaisana ara-nofo, manohitra ny firaisana ara-nofo, manohitra ny fanabeazana, manohitra ny fitiavana, manohitra ny fanambadiana, manohitra ny fahasambarana.
Ary io fitsaboana io dia omena maimaim-poana amin'ny alalan'ny Internet.
"Hatramin'ny 2002 dia ny manodidina ny 40-2 isan-jato dia ny manodidina ny 3 amin'ny ED (erectile dysfunction)," Mary Sharpe avy amin'ny Valin'ny Fanamarinana nilaza The Guardian. "Hatramin'ny 2008, rehefa nanjary mora nandefasana horonantsary maimaimpoana maimaim-poana, dia niakatra avo tsikelikely."
"(P) ny orn dia manova ny fomba hitiavan'ny ankizy ny firaisana," foana Sharpe, ary mitranga izany, "ao anatin'ny vanim-potoana izay iharan'izany amin'ny aretina ara-pahasalamana ara-tsaina sy ny fiankinan-doha. Ny fiankinan-doha sy ny aretina ara-tsaina indrindra no manomboka amin'ny fahazazana. "
Ny lahatsoratra Guardian dia nanolo-kevitra fa, "Miakatra amin'ny ampahatelon'ny zatovolahy ankehitriny dia miaina trangam-pandrenesana mahomby."
Nihamaro ny tranga ka nahitana azy io hoe: "Fihetsikana Erectile Erectile Porn" (PIED).
"Raha tokony hampandrenesina ny filahiany amin'ny olona tena izy, dia hita matetika eo anoloan'ny sehatra ny adolescent androany, ary manitsy ny firaiketam-pon'ny ati-dohan'ny atidohany ho irery irery ao amin'ny efitranony, ho an'ny voyeurism fa tsy mandray anjara", hoy ny fanadihadiana iray, Ny adolescent Brain dia mihaona amin'ny Internet malaza amin'ny Internet.
"Alien no teny ampiasaiko hamaritana ny fahatsapany rehefa niezaka nanao firaisana tamin'ny vehivavy tena izy aho," hoy ny tovolahy iray nanonona tao anatin'ilay lahatsary. "Nahatsiaro ho tompon-tany sy vahiny aho."
"Tahaka ny nahazoako fifehezana ny mipetraka eo anoloan'ny efijery (masturbating) izay eritreretiko fa ny firaisana ara-nofo fa tsy ny tena firaisana ara-nofo dia ny saiko", hoy izy nanampy.
"Ny vehivavy dia tsy manindry ahy, raha tsy efa nahavita roa tontaliny izy ireo ary tao ambadiky ny glasy fanaraha-maso", hoy ny iray hafa.
Ny hafa mitatitra ny hany fanantenan'izy ireo amin'ny fanatontosana sy fitazonana fananganana mandritra ny fifandraisana akaiky dia tokony "alaina sary an-tsaina".
Satria vaovao ny zava-mitranga, rahateo, ny fidirana amin'ny Internet haingam-pandeha miaraka amin'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny finday avo lenta, iPads, ary solosaina finday dia fanavaozana vao haingana - mila anaovana fanadihadiana lalina.
Mandritra izany fotoana izany, ny porofo mivaingana dia manaparitaka amin'ny maha-manam-pahaizana azy - anisan'izany ireo psychologists, psychiatrists ary urolistes - milaza fa mihaino ireo karazana fitarainana avy amin'ny zatovolahy ireo izay efa taloha be teo amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo.
Nilaza ny Life of Urologist Paul Church fa ny LifeSiteNews amin'izao fotoana izao dia tsy misy porofo manamarina fa ny fifandraisana misy eo amin'ny fampiasana sary vetaveta sy ny tsy fetezan'ny erectile, ny antony mahatonga ny saina sy ny mpitsabo ary ny mpitsabo, ankoatra ny tenako, dia mino fa tena olana lehibe ho an'ity taranaka manaraka ity. "
"Sarotra ny mahafantatra hoe firy ny zatovolahy maro no mijaly noho ny ADN. Fa mazava anefa fa zava-baovao izany ary tsy dia fahita firy izany, " nanamarika Dr. Abraham Morgentaler, talen'ny Human Health Boston sy profesora momba ny urology ao amin'ny Harvard Medical School.
"Fantatro fa marina izany noho ny zavatra niainako tamin'ity tranga ity tamin'ny olona niasa tamiko," hoy i Maureen Newberg, mpiasa ara-pahasalamana ara-pahasalamana nahazoan-dalana (LCSW) miasa any Washington, DC.
"Fanao tsy miankina amin'ny ankamaroan'ny 95 isan-jaton'ny mpanjifako dia lehilahy sy lehilahy. Saika ireo mpanjifan-dry zareo no manana olana amin'ny pôrnika na ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia ", dia nanambara tamin'ny LifeSiteNews ny fanambaràna ny mariazy sy ny mpitsabo arabo.
"Ny zavatra niainako momba ny olana sy ny fahombiazan'ny fampiasana sary vetaveta dia nahatonga ny fikarohana fa pôrnôsy dia 'zava-mahadomelina mahery'," hoy Pickup.
Ny fiankinan-dohan'ny filma, toy ny fiankinan-doha hafa, dia manimba ny fiainan'ny zatovolahy iray manontolo. Ny manam-pahaizana malaza any Eorôpa, Dr. Gerard van den Aardweg, dia mamintina izany:
Ireo andevozin'ny pôrnôgrafia dia lehilahy mahantra, atokana amin'ny fifandraisan'olombelona. Amboadia irery. Arakaraka ny maha-pôrnôgrafia azy ireo no mampatanjaka ny fientanam-pon'izy ireo amin'ny faniriana ho “lehilahy lehibe”, ary arakaraka ny mahaizy azy ireo amin'ny fifandraisana mivantana.
Ny voka-dratsin'ny tsy fahita matetika amin'ny alàlan'ny pôrnôgrafia amin'ny zatovolahy dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo sy ny fametavetana ny fifandraisana amin'ny fanambadiana salantsalany.
Mark Regnerus, profesora momba ny sosiolojia ao amin'ny Oniversiten'i Texas ao Austin ary mpiara-mianatra ao amin'ny Ivon-toerana Austin momba ny fianarana ny fianakaviana sy ny kolontsaina, soso-kevitra fifandraisana misy eo amin'ny fampiasana sary vetaveta sy ny fanohanana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ao amin'ny 2012.
Ny mpikaroka nanamarika fa “Ny fanohanan'ny tanora ny olon-dehibe amin'ny famaritana indray ny fanambadiana dia mety tsy vokatry ny idealy momba ny fahalalahana mivelatra, ny zon'olombelona, ​​ny fahalalahana ary ny fanoloran-tena mendrika amin'ny fahamarinana. Dia mety ho, amin'ny kely indrindra amin'ny ampahany, ny by-vokatry ny tsy tapaka ny hatsiaka amin'ny firaisana ara-nofo isan-karazany sy sary Asan'ny Apostoly, "nanatri-maso amin'ny alalan'ny aterineto vetaveta.
"Ny tranonkala malaza amin'ny tranonkala malaza dia tsy dia manana firy hanavakavaka ny fanaovana firaisana ara-nofo iray - na sokajy iray tahaka izany - avy amin'ny hafa," hoy i Regnerus. "Ny gazy dia atahorana ho toy ny fantsom-panafody mahatsiravina amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo."
"Tsy ireo Playboy raibenao ry zareo," hoy izy nanampy.
Ny omnipresence poizina sy ny herin'ny sary mamoafady amin'ny Internet
Satria efa niato nandritra ny am-polo taonany ny adin'ny "fahalalaham-pitenenana" an'ny zana-drahavavy sy ny indostriany, vitsy no nahamarika fa ny fahitan'ny tanora mpijery dia lasa fahavoazana ho an'ny fiarahamonina. Ankehitriny, ny fandripaham-batana dia lasa tsy hay hadinoina.
Dr. Donald Hilton, mpampianatra mpiara-miasa fanampiny ao amin'ny Departemantan'ny Neurosurgery, University of Texas Medical School ao San Antonio ary mpikambana ao amin'ny Board of Directors of Medical Institute for Sexual Health, dia nanoratra tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe: Fijerena sary vetaveta: famonoana ny afon'ny firaisana ara-nofo Toetrisetra (tsy misy intsony).
Any amin'ny toerana rehetra. Pornhub, tranonkala faharoa be mpitsidika amin'ny aterineto, nahitàna olona 92 arivo tapitrisa nitsidika an'i 2016, ampy ho an'ireo horonan-tsary 12.5 ho an'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. Lasa fomba fanao ara-piraisana ara-nofo ho an'ny zatovo ary na dia ny mpanao lalàna aza amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny tanora maro mahita ny firaisana ara-nofo, anisan'izany ny olona mihoatra ny roa.
Ity famoahana firaisana ara-nofo misy poizina amin'ny zanak'olombelona ity dia manimba ireo izay mijery azy ary mampiankin-doha an'ireo izay manohy mampiasa azy. Saingy, ireo teboka ireo dia toherina mafy amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia sy ireo mpiala tsiny amin'ny oniversite izay manohana azy. Nilaza izy ireo fa ny olana amin'ny pôrnôgrafia irery ihany no olana ateraky ny fitsipi-pinoana.
Dr. Jeffrey Satinover, ao amin'ny fanambarana izay navoaka tao amin'ny komity jeneraly amerikana tao amin'ny 2008, dia nanazava hoe: "Toa miharihary foana fa ny pôrnôgrafia dia tsy misy afa-tsy endrika endrika iray. ' Ny fahamendrehany, ny tsy fisian'izany, na ny faharatsiana dia niverimberina hatrany amin'ny teny mifanentana amin'ny 'fanehoan-kevitra', ary ny lalànantsika dia mitaratra be. Manohitra ny 'fitondran-tena' amin'ny literatiora vetaveta isika; ny natiorany ho 'avo' na 'ambany'; na manana 'vidiny manavotra.' Ny fanadihadiana momba ny 'asa' amin'ny 'literatiora' sy 'asan'ny' dikan-teny pôrnôgrafika dia voasoratra ao amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny lalànan'ny lalàm-panorenana amerikana-ny teny amina teny nindramina dia mampiseho mazava fa ny fanekena ny pôrnôgrafia amin'ny teny maneho dia fototra sy tsy voavaha. "
"Ny fahatongavan'ilay solosaina dia nanjary saika tsy misy fepetra ny rafitra mpanolotra ho an'ity fisavoritahana an-tsokosoko ity (Internet pornography)," hoy Satinover.
"Tahaka ny hoe namolavola endrika Xerox taloha isika mihoatra noho ny teo aloha, azo ampiasaina amin'ny fiainan'ny tokantrano iray ary mampiditra mivantana ny atidoha amin'ny maso", hoy i Satinover. "Afaka amin'ny famokarana tsy misy fetrany amin'ny alàlan'ny tambajotram-pifamoivoizana an-tsokosoko ankehitriny izy, nomem-boninahitra ho zavakanto ary voaro amin'ny Lalàmpanorenana."
Manala ny fahasimbana
Milaza ny Dr. Tim Lock, manam-pahaizana momba ny sikolojia sy mpampianatra, ao amin'ny Institute for Psychological Sciences, ao amin'ny Divine Mercy University, ny "fialam-boly vetaveta amin'ny tovovavy."
Hiaraka amintsika i PIED "mandra-panaingoana ny lehilahy amin'ny herin'ny fifehezan-tena ary ny ray aman-dreny dia afaka resy lahatra amin'ny filana ny fampiasana ny filaminana aterineto (sy ny andraikitry ny aterineto) mba hisorohana ny zanany tsy hijery tranonkala tsy mifanaraka amin'ny zava-misy", hoy Lock ao anaty fanambarana ho an'ny LifeSiteNews. "Tsy mora na tsy mora ny mitaiza ankizy izay sarobidy fifehezan-tena, fahadiovana, fahadiovana ary fahamaotinana. Ny mpampianatra ny ankizy dia tsy maintsy resy lahatra aloha ireo soatoavina ireo. "
"Sarobidy mafy izany," hoy Lock. "Raha tsy fantatrareo fa ny Tompontsika dia tonga hanome fiainana sy hanomezana azy betsaka."
Dr. Hilton dia manasongadina dingana efatra tena ilaina:
Voalohany, tsy maintsy miaro ny taranaka manaraka avy amin'ny firaisana ara-nofo mampidi-doza ataon'ny indostrian'ny pôrnôgrafika sy ny mpanohana azy isika;
Faharoa, tsy maintsy miverina any amin'ny fiarahamonina iray izay tsy manaiky ny olon-dehibe maneho ny maha-pelaka ny olon-dehibe;
Fahatelo, ny kolontsainantsika dia mihamatanjaka hatrany amin'ny fanavakavahana sy ny fanavakavahana, nefa mankalaza ny fijerin'ny olona ny firaisana ara-nofo sy ny fakantsary. Tokony hitazona ny indostrian'ny pôrnôjiana amin'ny fenitra mitovy ihany isika;
Fahefatra, tsy maintsy miverina amin'ny kolontsain'ny fanajana, ny fiaraha-miory ary ny fangorahana isika, izay fanoherana ny kolontsaina pornôlôjia maoderina.
Betsaka ny fampahalalana momba ny fialana vetaveta sy ny fialany amin'ny vokatra mety manimba azy dia hita ao amin'ny tranonkala mahasoa, Ny atidoha amin'ny pôrnôs.
Valiny miorina amin'ny Kristiana amin'ny fanandevozana amin'ny fampiasana sary vetaveta no atolotry ny Miezaha.
11 martsa 2019. Ao amin'ny lahatsoratra lehibe momba ny fomba fiainana nataon'i Amy Fleming, Mary Sharpe dia notononina matetika tamin'ny The Guardian amin'ny fampiasana sary vetaveta sy ny fihenan'ny erectile.
Moa ve ny pôrnôjia mahatonga ny zatovolahy tsy manan-tsaina?
Mahatratra ny ampahatelon'ny tovolahy izao no miaina tsy fetezana erectile. Ny sasany mitodika any amin'ny fepetra henjana toy ny implants penile - fa ny fandaka ny fahazaran-dratsy vetaveta no vahaolana tokana?
Fanoharana: Nishant Choksi
Tity misy fanentanana dokambarotra mandravaka ny tonelina ao amin'ny London Underground mitondra ny teny filamatra "MATY I ED" eo akaikin'ny sarin'ny lehilahy iray salama saina tamin'ny fahatanorany. “Aza manahy”, hoy izy tamin'ny fanoratana kely kokoa etsy ambany. “Tsy bandy i Ed. Zavatra bandy io. Fohy ho an'ny tsy fetezan'ny erectile io. ” Mandroso ny afisy marika vaovao ny sildenafil (malaza amin'ny anarana hoe Viagra), izay heverintsika fa mamono ny olana. Saingy, araka ny fijoroany, ED dia lavitra ny maty.
Ny tsenan'i Viagra taloha dia lehilahy zokiolona tsy salama, fa araka ny fanadihadiana farany sy fanadihadiana, eo anelanelan'ny 14% sy 35% ny tovolahy miaina ED. "Adala nefa marina," hoy i Mary Sharpe an'ny Valin'ny Fanamarinana, fiantrana fanabeazana mifantoka amin'ny fitiavana, firaisana ary internet. "Hatramin'ny 2002, ny tranga misy lehilahy latsaky ny 40 taona miaraka amin'i ED dia manodidina ny 2-3%. Nanomboka ny taona 2008, rehefa mora azo ny sary vetaveta maimaim-poana, dia nitombo hatrany izany. ” Ny porofo, pitsaboana ary anecdotal, dia mihombo fa ny fampiasana sary vetaveta dia singa iray lehibe.
Mampifandray ny ED sy ny fampiasana sary vetaveta
Clare Faulkner, psychosexual sy therapeutista fifandraisana monina any afovoan'i Londres, dia iray amin'ireo izay mampifandray ny ED sy ny sary vetaveta. "Manana mpanjifa ED aho ankehitriny eo amin'ny faha-20 taonany," hoy izy. Anisan'ny olana amin'ny pôrnôgrafia ny hoe “zavatra iray tsy azo ifandraisana mihitsy. Ny fanentanana dia avy ety ivelany, izay mety hanasarotra ny fidirana ao amin'ny vatanao. ” Izy io koa dia maharitra io angano io, hoy izy, fa "mafy ny lehilahy ary vonona hanao firaisana foana ny vehivavy".
Ny mpijery pôrnôgrafia irery dia lasa zatra mifehy tanteraka ny fiainany ara-nofo - izay indray, hoy i Faulkner, “dia tsy voaangona amin'ny tontolo tena izy”. Ny fiatrehana olona tena misy, sarotra, miaraka amin'ny filàna sy ny tsy fandriam-pahalemana, dia mety hampidi-doza.
Ao amin'ny forum an-tserasera natokana ho an'ny erectile erectile (PIED) nateraky ny pôrnôgrafia, tovolahy an'aliny maro no nizara ny tolona nijanonany tamin'ny fampiasana sary vetaveta, ny fivoarany avy amin'ny pôrnôgrafia malefaka ka hatramin'ny hardcore ary ny sakana atrehin'izy ireo amin'ny fananganana fifandraisana tena tantaram-pitiavana sy firaisana ara-nofo. Sarotra ny manaporofo mivantana fa ny pôrnôgrafia dia miteraka ED, saingy ireo fijoroana ho vavolombelona ireo dia mamerina ny zavatra hita avy amin'ny literatiora klinika: fa raha afaka mandoka ny fahazaran-dratsin'izy ireo ny lehilahy dia manomboka mamerina ny fahafahany mitarika ny firaisam-po amin'ny tena fiainana.
Ny tovolahy sasany dia nanomboka ny fihetsik'izy ireo ho fanohanana ifotony, toy ny NoFap (slang ho an'ny "tsy mihetsika"), natsangan'i Alexander Rhodes tany Etazonia. (Tsikaritr'i Sharpe fa ny tovolahy ankehitriny dia "mampitovy ny filokana amin'ny pôrnôgrafia - tsy hitan'izy ireo misaraka".) Rhodes, 31 taona izao, dia nanomboka nampiasa pôrnôgrafia tamin'ny Internet tamin'ny 11 na 12 taona. "Izaho dia tao amin'ny taranaka voalohany nitombo. amin'ny pôrnôgrafia haingam-pandeha haingam-pandeha, ”hoy izy nandritra ny dinika an-tserasera farany teo.
Ny fotoana dia nanomboka tamin'ny 19 firaisana ara-nofo, dia nanohy: "Tsy afaka mihazona ny fananganana tsy sary an-tsaina vetaveta. Ny pôrnôgrafia haingam-pandeha dia ny fanabeazana momba ny firaisana. ” Tamin'ny taon-dasa, hoy izy tamin'ny mpijery iray tao amin'ny Ivotoeram-pirenena Amerikanina momba ny fanararaotana ara-nofo: "Ny zanaky Etazonia sy ny ankamaroan'ny firenena mandroso dia alefa amin'ny alàlan'ny traikefa an-tserasera izay tsy maintsy atao ny mijery sary vetaveta.
Manomboka tanora ny mpampiasa pôrnôgrafia
Ny fahatanorana nanombohan'i Rhodes nijery sary vetaveta dia tsy mahazatra. Tamin'ny 2016, hitan'ny Oniversite Middlesex fa, miaraka amin'ny 60% amin'ireo ankizy no nijery azy voalohany tao an-tranony. ary fianarana irlandey navoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity tao amin'ny diarin'ny Fikarohana momba ny pôrnôgrafia dia nahita fa 52% ny ankizilahy nanomboka nampiasa sary vetaveta ho an'ny filokana tamin'ny faha-13 taonany na ambany. Mety ho vavahady ny media sosialy, hoy i Sharpe. "Ny kintan'ny pôrnôgrafia dia manana kaonty Instagram ka asainy mijery azy ireo ny ankizy ao amin'ny Instagram, ary ao anaty ny fitaovany dia hiteny izy ireo hoe: 'Jereo ny horonantsariko farany.' Tsindrio iray na roa ary mijery pôrnôgrafia ianao. Ny ankizy 12 na 13 tsy tokony hijery fitaovana matotra ho an'ny olon-dehibe. ”
Ny Reward Foundation dia tsy fikambanana anti-pôrnôgrafia, hoy i Sharpe, “fa ny pôrnôgrafia be loatra dia manova ny fomba fanentanana ny ankizy hanao firaisana”. Ary mitranga izany amin'ny taonan'ny fiforonany, “amin'ny vanim-potoana tena mora tohanan'ny aretin-tsaina sy fiankinan-doha. Ny ankamaroan'ny fiankinan-doha sy aretin-tsaina dia manomboka amin'ny fahatanorana. ” Mino izy sy Faulkner fa ny fiakaran'ny fampiasana sary vetaveta dia mety hanazava amin'ny ampahany farafaharatsiny ny antony millennial dia manao firaisana kely kokoa noho ny taranaka teo alohany, araka ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary Archives of Sexual behaviour.
Traikefa amin'ny mpampiasa pôrnôgrafia
Gabe heverintsika, ny mpanorina ny vondrona fanarenana ny boky sy sary vetaveta Atsaharo ny firenena, miresaka ampahibemaso ny zavatra niainany manokana. Fony izy 23, hoy izy: “Nanandrana nanao firaisana tamin'ny tovovavy tsara tarehy iray aho, vehivavy iray nahasarika ahy fatratra, ary tsy nisy zavatra nitranga. Aho, hany ka tsy nahatsapa na ara-batana arousal ka tsy mahazo ny kely levitra kely iray. "
Toy ny hafa mampiankin-doha, hoy Faulkner: "Mila olona matanjaka fatrany mba avo. Ny fanosehana ny fetra hatrizay dia mba hahitana fientanam-po sahala amin'izany. Midika izany fa mihasarotra sy mampatahotra kokoa ny zavatra jeren'izy ireo. Nasain'ny mpanjifa nilaza tamiko izy ireo fa tsy mahazo aina amin'ny fitaovana hitan'izy ireo. ” Rehefa mandalina ny mpikaroka atidoha ny compulsive mpampiasa sary vetaveta, hoy Sharpe: "ry zareo mitovy atidoha nahita ny fiovana izay fahita amin'ny fahazaran-dratsy rehetra."
Fanahiana amin'ny fampisehoana
Ny sasany dia mbola manilika ny fiakaran'ny ED eo amin'ny tovolahy mampatahotra, saingy nilaza i Sharpe na dia mety marina aza izany ho an'ny sasany, "Ny zavatra henontsika amin'ny mpitsabo, ny mpitsabo ara-pananahana, ny dokotera ary ny olona miatrika fihetsika mamoafady dia ny 80% -n'ny olana mifandraika amin'ny pôrnôgrafia." Ny Reward Foundation dia efa nanatontosa atrikasa miaraka amin'ireo mpitsabo amin'ny fahasalamana manerana an'i Angletera ary nahita fa ny dokotera sy ny mpivarotra fanafody dia tsy mieritreritra akory ny hanontany ny marary lahy tanora izay manana ED momba ny fampiasana sary vetaveta. "Manome azy ireo Viagra izy ireo ary tsy mandeha amin'ny ankamaroan'izy ireo izany," hoy i Sharpe. “Tsy ny fiatrehana ny olana miteraka izany.”
Rehefa tsy mandeha ny zava-mahadomelina dia nandre momba ny tovolahy mahazo implant penile (mpivaro-tena napetraka ao amin'ny filahiana mba hanampiana ny fananganana) i Sharpe. "Ny iray amin'ireo mpandray anjara ara-pitsaboana amin'ny iray amin'ireo atrikasa tamin'ny taon-dasa hoy ny marary efa roa maniry toy izany." Tsy nisy nieritreritra ny hanontany azy momba ny fampiasana sary vetaveta.
Tamin'ny fitsidihan'ny sekoly vao tsy ela akory izay, dia nahatadidy zazalahy kely iray i Sharpe nanontany azy hoe impiry isan'andro ny filokana amin'ny pôrnôgrafia dia be loatra. “Nampiasain'izy ireo foana io,” hoy i Sharpe, “ary tsy misy milaza amin'izy ireo fa olana izany.”
24 Febroary 2019. Nanome fanehoan-kevitra tamina gazety i Mary Sharpe momba ity tranga mampalahelo ity tany amin'ny Fitsarana Scottish. Nanaitra ny firenena izany. Hita ao amin'ny The Sunday Post ihany koa ilay tantara ho “"